Bespoke izibini umalusi hud kunye nebhafu eshushu Conwy - I-Airbnb
Bespoke izibini umalusi hud kunye nebhafu eshushu Conwy
Indlu encinci enamavili sinombuki zindwendwe onguRachael
I-Bespoke Shepherds Huts zethu zibonelela ngamava okugqibela aqaqambileyo. Ifakwe ikhitshi / indawo yokutyela, ibhedi enkulu yenkosi enomandlalo ogwebu lwenkumbulo kunye nebhafu etshiswe ngamaplanga! Ime kwintlambo yeConwy imizuzu emihlanu ukusuka kwi-Snowdonia kunye ne-zip world. Ukuqhuba nje okufutshane ukuya eBetws y coed edumileyo, eConwy kunye necala lolwandle eLlandudno. Ijikelezwe ziihambo ezintle kunye nokunyuka intaba i-Erw Glas campsite ikwindawo efanelekileyo yokubona kunye neentsuku zokuphuma.
Sinezindlu ezihlanu ezikhethekileyo zokwalusa, iintente zeglamping kunye nebala lokukhempisha. Siyindawo encinci yosapho ejikelezwe ziimbono ezintle zentlambo enendawo eninzi yabantwana yokudlala. Sineeshawa ezishushu ezisimahla kunye nezindlu zangasese zomntu ngamnye ezinendawo enkulu yeshawa yosapho kumgama nje omfutshane ukusuka ezindlini. Iindlwana zethu zezithandani zinika indawo yokuthandana ejikelezwe ziimbono ezintle kunye nebhafu eshushu! Indlu nganye inendawo yayo yokuhlala yabucala kunye nendawo yokupaka iimoto.
Nceda uqaphele ukuba iibhabhu ezishushu ziinkuni ezitshisa iityhubhu ezishushu kwaye zinokuthatha iiyure ezi-1 ukuya kwezi-3 ukufudumeza ukuxhomekeka kwemozulu - hlala phantsi, uphumle kwaye uthathe iimbono.
Sinenkuku ezizulazulayo simahla kwindawo ke ngoko nceda ugcine izinja kwisikhokelo kwaye uzibeke iliso ngamaxesha onke.
4.91 · Izimvo eziyi-105
Simi kwiNtlambo yeConwy, iimbono ziyamangalisa, sijonge phezu kwentlambo ukuya emazantsi e-Snowdonia, iDolgarrog kunye nePenmaenmawr.
Singqongwe yindalo, 'neeKites eziBomvu' kunye 'namaBhaza' abhabha esibhakabhakeni sethu!
Sihlala kwindawo ngoko siya kuba nakho ukunika naliphi na icebiso kunye noncedo apho lufuneka khona.